အုန်းရည် အင်္ဂုလိမာလသုတ်နှင့် မဗိုက် - YOYARLAY Digital Media and News
အုန်းရည် အင်္ဂုလိမာလသုတ်နှင့် မဗိုက်
Published: August 8, 20188:46 am Updated: February 14, 20192:41 pm
မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မီးဖွားတော့မယ်ဆို အဂုၤလိမာလသုတ်နှင့် အုန်းရည်ကတော့ မပါမဖြစ် ပါပဲ။ မွေးရ ဖွားရ လွယ်စေတယ်တဲ့…။ ဒါက
မိဘဘိုးဘွား အစဉ်အဆက်ကတည်းက စွဲစွဲမြဲမြဲ လက်ခံလာတဲ့ အယူအဆတစ်ခုလို့ ဆိုရမယ်။
ဒီတော့….ဒါဟာ တကယ့်ကိုပဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် အယူ ဟုတ် မဟုတ် … လက်ခံသင့် မသင့်? ကျန်းမာရေးရှုထောင့်က ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါကျတော့ အုန်းရည်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မဗိုက်တို့အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်တဲ့…။
– အုန်းရည်မှာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတယ်။
– အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီး အစာမကြေ၊ ရင်ပူခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးတယ်။
– ကိုယ်ခံအားတက်စေတဲ့အတွက် ရောဂါပိုးတွေကနေ ကာကွယ်ပေးတယ်။
– သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးတယ်။- ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဆီးချိုတက်နိုင်ချေကို လျှော့ချပေးတယ်။
– ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုအဆီတွေကို များစေပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့အဆီတွေကို လျော့ကျစေတယ်။
– အုန်းရည်ဟာ မိခင်ကို ကျန်းမာစေတဲ့အလျောက် သန္ဓေသားကိုလည်း ကျန်းမာစေပါတယ်။
ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့…ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အရကြည့်မယ်ဆိုရင်….မည်သည့်ဘာသာ…မည်သည့်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုမဆို…. မိမိယုံကြည်သက်ဝင်ရာကို အာရုံစူးစိုက်ထားတာမျိုး ဖြစ်တဲ့အတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားနဲ့ ကောင်းကျိုးများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous Previous post: ဆိုလ်း (Seoul) မြို့ကြီးကိုမသွားခင် သိထားဖို့လိုတာလေးတွေ
Next Next post: အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်နဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး သံပုရာရည်ကို ထုတ်လုပ် ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး
အော်တစ်ဇင်ကလေးဖြစ်ကြောင်း ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာ (၅) ရပ်
“ကျွန်မကလေးမှာရော အော်တစ်ဇင်ရောဂါရှိလား” ကလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှုအရမ်းများတတ်တဲ့ မိဘတွေက ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုး မေးတတ်ကြပါတယ်။ Post Views: 3,416
Published: August 7, 20186:28 am Updated: February 14, 20195:19 pm
ကိုရီးယားကင်မ်ချီက ပေးစွမ်းတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ
အခုဆိုရင် ကိုရီးယားအစားအစာတွေက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ နေရာယူနေပါပြီ။ ကိုရီးယားအစားအစာတွေက အရသာရှိရုံသာမက ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ကိုရီးယားအစားအစာတွေရဲ့သက်ရောက်မှုက အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ ကိုရီးယားအစားအစာတွေထဲကမှ လူအများစု ကြိုက်နှစ်သက်လာကြတာတော့ ကင်မ်ချီပါပဲ။ ကိုရီးယားစားသောက်ဆိုင်၊ ကိုရီးယားအသားကင်ဆိုင်တွေထိုင်လိုက်တာနဲ့ ကင်မ်ချီက မပါမဖြစ် ချပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အချဉ်ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့…
Published: November 25, 20213:22 pm Updated: 2:23 pm